avylavitra · Mey 2013 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Mey, 2013
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Mey, 2013
Anas Hamra, Palestiniana avy any Gaza, manamafy fa azony ihany ny Kentucky Fried Chicken (akoho voaendy) nafàrany - taorian'ny ora fito niandrasany. Ny tantarany dia manamarina tatitra iray tao amin'ny New York Times izay milaza fa avy any Al Arish, any Ejipta, no aterina ny KFC ho an'ny mponin'i Gaza, toerana izay anaovana azy ireny varomaizina mandalo tonelina miafina. Hatreo dia tsy nitohy ny fanaterana any an-tokantrano, saingy farafaha-ratsiny, mba afaka nihinana ny KFC-ny i Hamra ary nibitsika sy nandefa tamin'ny Istagram ny zava-niainany.
Amin’ny firenena iray izay manakaiky ny 40 isan-jato ny tahan’ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra eo amin’ny lahy sy vavy (15 taona no miakatra), ny fampianarana sy ny fandrisihana ireo vehivavy sy ny tanora dia tsy maintsy ilaina mba hisian’ny fampandrosoana mivaingana ao Yemen. Milaza ireo mpikatroka mafàna fo ny amin’ny antony tokony haha-zo fa tsy tombontsoa ny fampianarana.